Ylesdị edozi isi
Di na Nwunye na Mmekọahụ
Mụ nwoke Stylish Ọ pụtara na 2008 dịka ebumnuche nke chọrọ itinye okwu niile metụtara mmadụ n'otu akụkụ. N’ụzọ dị otu a, ebum n’uche anyị bụ ka ndị ọrụ webụsaịtị a nwee ike idobe onwe ha, jiri ejiji n’ụzọ kwesiri ekwesi ma lekọta onwe ha anya. Na mpempe, na Internet ọrụ nwere Ndị nwoke na Style ha axis nke akwụkwọ na Internet.
Dị ka o kwesịrị ịdị, nke a ga-ekwe omume naanị site na otu nchịkọta akụkọ dị n'azụ HcE, nke ị nwere ike ịchọta n'okpuru. Y’oburu n’iche na inwere ike inye aka na saiti anyi ichoro isonye otu ndi editọ a, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyi ebe a. I nwekwara ike ịga na ngalaba anyị ngalaba, ebe ị nwere ike ịgụ isiokwu niile anyị bipụtara kemgbe ọtụtụ afọ.
Ọ bụ ihe nsọpụrụ inwe ike inye ndụmọdụ kachasị mma gbasara ịke, nlekọta na ibi ndụ ụmụ nwoke. Enwere m obi ụtọ banyere ihe niile metụtara ụwa ya ma nwee ike ịchọpụta njedebe nke ihe ịchọ mma na ụdị dị iche iche dị n'ụdị ejiji ya. Choputa ihe nile ichotara na ufodu uzo na agam n’ihu ebe a.
Achọrọ m ibi ndụ dị mma, na-emega ahụ ma na-eri ezigbo nri. Maka nke ahụ, ana m agwa ihe gbasara ahụike gbasara ịga ụlọ ọrụ mgbasa ozi dị iche iche. Ọzọkwa, enwere m mmasị n'ịkesa ihe niile m mụtara site na isi mmalite m.
Ana m asọpụrụ ụwa nke ndụ dị mma, ọkachasị isiokwu metụtara ahụike na nri. Na-agbaso ụkpụrụ nke 'Mens sana in corpore sana'. Na echiche sayensị. Na mgbakwunye, enwere m ọzụzụ na nsogbu ahụike na mgbochi nsogbu, yana njikwa gburugburu ebe obibi na ụlọ ọrụ. Ihe dị oke mkpa, ebe ọ bụ na ịnweghị ike ịchọta ahụ ike ma ọ bụrụ na enweghị gburugburu ebe obibi dị mma.
Portillo nke German
Abụ m onye na-azụ ọzụzụ na onye na-edozi ahụ egwuregwu. Anọ m na-arara onwe m nye ụwa nke ahụike na nri na-edozi ahụ ruo ọtụtụ afọ ma enwere m obi ụtọ banyere ihe niile gbasara ya. Na blog a, echere m na m nwere ike itinye aka n'ihe niile m maara banyere ịkpụ ahụ, otu esi enweta nri ziri ezi ọ bụghị naanị iji nweta ahụ dị mma, mana iji nweta ahụ ike.
M omiiko banyere nwoke ejiji. Ọ bụrụ n ’ọ masịrị gị iso ihe ọ bụla na - eme n’ihe banyere ejiji na mma maka ụmụ nwoke, m ga - akwado ka ị gụọ isiokwu m.
Amụrụ na Malaga na 1965, Fausto Antonio Ramírez bụ onye na-enye aka oge niile na mgbasa ozi dijitalụ dị iche iche. Onye edemede akụkọ, o nwere ọtụtụ akwụkwọ na ahịa. Ọ na-arụ ọrụ ugbu a na akwụkwọ ọhụrụ. N'ịbụ onye nwere ọmịiko banyere ụwa nke ejiji, ahụike okike, na ọmarịcha ụmụ nwoke, ọ rụrụ ọrụ maka usoro mgbasa ozi dị iche iche maka isiokwu ahụ.
Carlos Rivera onye nhazi ihe oyiyi
Stylist, visual merchandiser na ejiji & si ebi ndụ nchịkọta akụkọ. Ugbu a, m na-emekọ ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche na mgbasa ozi dị ka onye nwe onwe ya. Can nwere ike soro m na ntanetị nkeonwe m ma, n'ezie, gụọ m 'Ndị nwoke na ụdị'.